Wajiga labaad dood cilmiyeed looga hadlayay xiriirka ka dhaxeeya Hooyada iyo Gabadha oo Muqdisho lagu qabtay
Wajiga labaad dood cilmiyeed looga hadlayay xiriirka ka dhaxeeya Hooyada iyo Gabadha ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo qeyb galeen in ka badan 150-haween, isugu jiray Hooyooyin, gabdhaha Ciidanka xooga dalka, booliska, Gabdhaha dhigta Iskuulada iyo Jaamacadaha iyo kuwa guri joogtada ah.
Dood cilmiyeedka oo ay soo qaban qaabisay Hey'adda Wada hadalka bulshada ayaa waxaa ka qeyb galay Mas'uuliyiin ka socday Wasaarada Horumarinta Haweenka iyo Qoyska, Ururada Haweenka kala duwan iyo Howl wadeenada Hey'adda Wada hadalka Bulshada.
Ugu horeyn ayaa waxaa dood cilmiyeedka furtay Wasiiru Dowlaha Wasaarada Horumarinta Haweenka iyo Arrimaha Qoyska Luul Cabdi Aadan oo ka hadashay muhiimada ay leeyihiin Haweenka iyo doorka ay bulshada dhexdooda ku leeyihiin, iyadoo xustay in haweenku xilligan ay kala qeybsan yihiin, waxaana ay ku baaqday inay Midnimo la yimaadaan.
"Haweenka waxaa jira kuwo kala jaban, waxaa jira qaarkood aaminsan mabaa'dii qaldan oo kuwa Soomaali diidka ay ku shubeen, marka xiriirka ka dhaxeeya Hooyada iyo gabadha waa yaraan karaa"ayay tiri Marwo Luul Cabdi Aadan.
Sidoo kale Marwo Luul ayaa sheegtay in haweenka ay qabaan baahi badan oo bulshada ah, waxaana ay tibaaxday in hooyada Saliimka looga baahan yahay sida ubadkeeda qaaliga ah ay u daryeesho, waxaana ay ku baaqday in la sameeyo wacyi gelin si aan haweenka loogu abuurin xag jirnimada.
Marwo Luul ayaa ugu baaqday gabdhaha inay dalkooda u hiiliyaan, midnimada iyo nabadana ka shaqeeyaan, ayna is aaminaan, waxaana ay tilmaamtay in aan loo adeegsan fikradaha daldan.
Agaasimaha Wasaarada Haweenka iyo Arrimaha Qoyska Maxamed Cumar Nuur ayaa sheegay in sida ay ku wada shaqeyn karaan haweenka iyo wasaarada, isagoo xusay in haweenka looga baahan yahay inay ka mideysnaadaan xasilinta dalka.
"Haweenka Waa laf dhabarta Bulshada, waa inay fikirkooda ay mideeyaan, inay ka hortagaan dhibaatada, waa dareemi karnaa culeyska haweenka xilligan ka saaran ragga, waayo haweenka dhib ayaa loo geystaan, tacadiyo la kulmaan"ayuu yiri Agaasimaha Wasaarada Haweenka iyo Arrimaha Qoyska.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in dhowaan bisha June la furi doono goob ay ku soo dacwoodaan Haweenka dhibaatada loo geysta, isagoo tilmaamay inay iska kaashanayaan Ciidamada booliska dowladda iyo ciidamada Booliska Amisom sida uu yiri.
Xamdi Xasan Ibraahim oo ah xubin ka tirsan Gudiga Dib u Heshiisiinta qaranka ayaa sheegtay in hooyooyinka ka gaabiyeen ka warqabka qoysaskooda, waxaana ay ku adkeysay inay ka war qabaan caruurtooda.
"Hadii qoyska aan bar baarintooda la soo dhisin wax badana halaabayaan, hooyooyinka waa ay ka gaabiyeen ka warqabka ubadkooda"ayay yiri Xamdi Xasan Ibraahim.
Najmo Cali Cadde oo ka mid ah gabdhaha wax bartay iyo Sahro Maxamuud Amiin oo ah Gudoomiyaha Haweenka ee Hey'adda CCD ayaa sheegay in gabdhaha wax la baro, isla markaana la wacyi geliyo si qoyska uu u dhismo.
Sucdi Maxamed Cali oo ka mid ah Mas'uuliyiinta Wasaarada Haweenka iyo Qoyska ayaa sheegtay in dhinaca hooyooyinka ay dabacsanaan ka jirto, habka lagu wacyi geliyo laga soo bilaabo guriga, isla markaana laga hortago fikradaha qaldan, xiriirka ka dhaxeeya waalidka iyo caruurtana la dar dar geliyo si iska warqabku u noqdo mid sii shaqeeya.
Ugu dambeyn dood cilmiyeedka ayaa ka qeyb galayaasha ahaa kuwo ay diirada ku saarayeen qodobada looga doodayay ee la soo diyaariyay, kaasoo ku saabsanaa xiriir joogta ah oo dhex mara hooyada iyo gabadheeda lagana hortago dhibaatooyinka haweenka, isla markaana gabadha lagu koontaroolo waxbarashadeeda, si aanay u dhicin in la marin habaabiyo.